Root Capital waxay ku maalgashaa koritaanka shirkadaha beeraha si ay u bedeli karaan bulshooyinka reer miyiga ah. Ganacsiyadaasi waxay iibsadaan dalagyada sida kafeega, kookaha, ama quinoa ee beeralayda yar yar. Iyadoo koritaanka, waxay noqonayaan muraayad saameyn ah oo kor u qaadi kara dakhliga, abuurista shaqooyinka, awoodsiinta haweenka iyo dhalinyarada, inay ku noolaadaan nabadda ayna ilaaliyaan nidaamyada deegaanka ee nugul. Root Capital waxay ganacsatadan siinaysaa ilo muhiim ah: helitaanka raasumaal, ganacsatada iyo ganacsatada farsamada, tababarka maaliyadda iyo dhaqanka ilaalinta.
Taageero ay bixisay Hay'adda McKnight Foundation, Root Capital waxay qabanqaabisay seminaaro dhaqaale oo loogu talagalay afar ururo quwad-abuur ah oo ku yaala dhulalka Bolivia. Tababarkan ayaa xoojiyay kartida shaqaalaha ururadan si ay u maamulaan ganacsigooda si wax ku ool ah waxayna abuuraan fursado beeralayda yaryar ee gobalka oo helitaanka maaliyadda iyo tababarku aad iyo aad u yaryahay. Intaa waxa dheer, Machadka McKnight wuxuu maalgeliyey daraaseyn saameyn ah oo u oggolaatay Root Capital in uu qiimeeyo in raasamaalka iyo tababarka uu bixiyay ay saameyn ku yeesheen beelahan beeraleyda ah. Inta badan beeralayda quinoa ah ee la daraaseeyay ayaa sheegay in markii ay ku biireen ururada soo saaraha ah in Root Capital taageeray, tayada noloshooda ay fiicnaatay.
Iyadoo la kaashanaysa maalgeliyayaasha sida McKnight Foundation, Root Capital waxay bixisay adeegyo talooyin ah in ka badan 1,000 shirkadood oo ku yaal Latin America, Afrika, iyo Aasiya, waxaanay $ 1.2 bilyan u qaybiyeen lix milyan oo qof oo ku nool bulshooyinka beeraha.
Rivers Healthy Hogaamiya Bulshooyin Caafimaad qaba
Imtixaanka Qorshaynta ee Deganayaasha Degmadu waxay keenaysaa natiijooyin wax ku ool ah
Dhulka Dhexdhexaad ah, Derisyada Barida Deriska Barashada Noocyada Beeraha Cusub